トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Latabatra hisafidy amin'ny fotoana pachinko parlors hetsika
Pachinko efi-trano tamin 'ny fotoana ny hetsika toa manana bebe kokoa ny endriky ny olana ankapobeny, fa tsy misy toy izao. Latabatra foana na dia sitrana tamin 'ny fotoana ny zava-nitranga dia ankehitriny. Mazava ho azy, satria izany no natao tao mivoaka, fa ho tonga raha ny sehatra hisafidy raha oharina mora foana ny marina, mba hampihenana ny fampiasam-bola bebe kokoa, dia hampahafantatra ny safidy ny sehatra amin'ny fotoana ny hetsika natao.
Voalohany indrindra, dia te-hifantoka amin'ny fotoana ny zava-nitranga dia famantarana ohatry ny fivarotana tsirairay. Fa
takelaka modely fivarotana, satria ny ankamaroan'ny te-hanome ny modely, ampy ho hetsika lehibe, tsy maintsy hametraka ny hery eo amin'ny takelaka modely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko. Ny hany famantarana modely, no tonga mba hanatsarana ny Horukon napetraka sy ny fantsika fanitsiana noho ny ara-dal?na foana. Ny modely fantina tamin'ny fotoana ny zava-nitranga, dia tsarovy ny lalao ao amin'ny takelaka modely.
kosa, tsy mametraka hery be loatra, lavo indray ny fanarenana modely amin'ny fotoana ny antsoina hoe zava-nitranga dia ny Xintai.
in Xintai, na dia tsy namoha ny fantsika kely, ka ho antsika nipetraka mpanjifa tsy mitombo ny Horukon toerana, Xintai no matetika no natao modely ao amin'ny famerenana amin'ny mifamadika. Noho ny
■ zava-dehibe eto
pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny fandraharahana politika, mba hampitombo ny isan'ny mpanjifa dia ny asa namoaka ny payout, tanterahina mba tsara amin'ny mpanjifa, payout any amin'ny tany izay olona tsy manao na inona na inona manangona tsy mila hamoaka a. Izany dia ho tsara foana ao an-tsaina satria fototra ao amin'ny fipetrahany izy. Raha vao tapa-kevitra ianao ny
hira modely, kosa, fa angon-drakitra, eto miezaka ny mifantoka amin'ny latabatra tezitra ny andro teo aloha. Ny andro mialoha fototra mafy dia, ka mety fa Horukon napetraka sy ny fantsika fanitsiana dia tsy niova ara-dal?na fantsika. Na izany aza, eo amin'ny raharaha ny hiasa araka ny tokony andian-tsoratra, nanangana ny Horukon toerana, dia mety hanokatra ny fantsika.
nandritra ny hetsika, satria misy ihany koa ny andro tianao nampakatra ny raharaha ny payout, fa izahay iany maty, mazava ho azy, dia ho mafy hijoro bebe kokoa inflate ny tsy fahampian'ny ka nikasa hanangana ny Horukon teo ho mafy, toy ny eo. Araka izany, Strong nijoro, dia be tokoa ny deferring toy ny mahazatra.
kosa, ao ny tezitra tahaka ny latabatra ny fantsika, ny fiantraikan'ny dia ho malemy sy tsy avy nihodina toy ny mahazatra ihany. Ankoatra izany, midika izany fa ny zava-nitranga ihany koa ho toy ny toeram-pivarotana, raha tsy avy dia ho very. Noho izany, tezitra mitsangana mba hahazoana ny rotational hafainganam-pandeha, tsy mitsaha-mitombo ny Horukon napetraka, no hanokatra ny fantsika noho ny mahazatra.